DEG DEG:Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdulahi Farmaajo oo Lagu wado inuu kala Diro barlamaanka,Awood Madaxweyne. – Marqaanmedia24.com
DEG DEG:Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdulahi Farmaajo oo Lagu wado inuu kala Diro barlamaanka,Awood Madaxweyne.
March 30, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 34
Ilo Wareed lagu kalsoon yahay Ayaa Sheegaya Inuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdulahi farmaajo Soo dhex galay Barlamaanka,isagoona Qeyb ka Ahaa Sidii xal Loogu heli lahaa Golaha Barlamaanka Laga Soo Bilaabo Khilaafka Xiligu bilaamay.
Kulamo Uu la Qaatay Gudiga Bur Buray ee khilaafka Barlamaanka Xalintiisa loo magacabay Ayaa Madaxweynaha Kulankii ugu Danbeeyey ku sheegay Inay Xalka waayeen ,waxana Madaxweynaha Talaabada kadib uu Qaatay Go’aan Ugu danbeeyey.
Waxay wararka Sheegayaan Inuu madaxweynaha Qaadayo talaabo lagu kala Dirayo Golaha Barlamaanka Madama Xal loo waayey Khilaafka In la xaliyo Guud Ahaanba.
Wararka waxay Intaasi Ku darayaan Inuu madaxweynaha Soomaaliya Sabtida Lagu wado Inuu Awood madaxweyne Ku kala Diro Barlamaanka Soomaaliya Madama Khilaafka Dhexdooda uu Noqday kii ugu Adkaa oo Soo Mara Barlamaanka Soomaaliya.
waxa Guud Ahaan Qabsoomi waayey Mooshinka Gudoomiyaha Barlamaanka Sidoo kale Waxa tanaasul laga waayey Labada Dhinac ee barlamaanka oo garab ka Mid Ah Xukumada Lagu Eedaynayo.
isha Ku hay Wararka Marqaanmedia.
WAR CUSUB:C/wali Ibraahim Muudey oo Loo balan qaaday Gudoonka Barlamaanka Inuu noqdo ,Kuna haysta Jawaari.
Deg Deg:Muudey Iyo Jawaari OO ciidamo Isku Adeeg Sanaya
Kala dir kaliyu ma shaqaynayso ee marka uu shaqada ka wada cayriyo waa in uu dhammaantood u dhiibaa AL-Shabaab ha ka shaqaysteene.Kuwaas shabab ha loo gacan galiyo.Laluush qaatayaal waxay ku habboon yahiin in la cinqaabo inta ku caan baxday mooshinka iyo Laaluush qaadashada.
KU:Mr.Hard-Liner Dab La Riday.
Haddii maanta adiga lagu yiraahdo si ugal Xildhibaanada hadda xamar jooga waliba inta ku caan baxday Mooshinada iyo Laalush qaadashada maxaad ugu talin lahayd oo kale?Kuwaas iyo shacabka soomaaliyeed nabad iyo wanaag kama dhaxeeyaan hadda.
X saalax says:
ARMAAJO FASHILMAY,WAANU ISKAGA TAGAA XUKUNKA HADUU DAMIIR LEYAHAY,
HADII KALE KHILAAF BUU KU DHAMEYSAN DOONA,KKKKKKKKK
Sida caadigaa oo ad adiguba ogtahay adigaa u baahan Ina farmaajo iyo maamulkiisa oo adiga waxba lagaagama baahna.War maxaa wax lagaaga baahdaa maba haysatid wax lagaaga baahdee.Shacabkaagii kaa soo cararay baa Garoowe iyo Xamar safaf ugu jira shaxaad iyo somali passports.War abaal daridu waa fal shaydaan ee iska jir taas.Lagana yaabee in aad ka mid tahay kuwa safaf istaaga maalinkastaba oo ad haddeer u taagan tahay shaxaad iyo Waar Dee Noo Dhiiba.Shaxaadka iyo ka badanba waan kuu ogolnahay ee adiguna iskadaa waxaan kuu socon doonin oo ah Dee waxaan nahay Dawlad gaara.
MADAXA MA ISLA WADA GALEEN INTAY JAMHUTIYADA BARAKAYSAN KU SOO JEEDEN.
@ Libaaxa Mudug.
Marka Hore Salaan Sharaf,Marka Xiga waad ku Mahadsan tahay sida tolnimada leh ee aad warsangeli u Difaacday. Laakin Sxb Anigu iljeex waan aqaana wax weyna ilama aha waan Ogahay in Canshuurta looga Qaado Airport Gaalkacayo markay ka duulayaan iyo markay ka soo degayaan. Waxaan Kaloo ogahay in Isaaq aanu siyaasad isku hayno laakin aysan naga dhexeyn Nacayb Sinji. Waxaan kaloo ogahay in Dab La Ridey uusan Magac & Maamuus Miskiin ka ahayn Qashinkan iljeexna wax ay yihiin ana waan ogahay somaliweyna wey Ogtahay.
Mooryaan Cubeyd iyo mooryaan Somali waa Qashinki lagu soo koriyey Dagaaladdi Boobka Qaranka waana derbi jiif aan Naf badan lahayn.
Thanks Caaqilka Reer Khalaf
Waxii Soomaali kheeyr ugu Jiro Allaha waa dajiyo madaxweeynaha aamiin yaa Rabbi nabad nasii waa daalnay ciyaalkii baa naga habaay
Haduu kala diro waa doorasho cusub oo madaxweyne haduu daayona waa sidaan iyo si kadaran! Fashil fashil..
Haddii uu Ina farmaajo kala diro maamulka xamar waa saad rabteen dawlad la’aanta.Sababtoo ah waxaa la idin ka shidaa dawlad iyo nidaam xaq ku dhisan.Waxaa idiin daran oo ad neceb tahiin dawlad wax ku ool ah iyo kala dambayn joogto ah.Waxaadna jeceshahiin is dhexyaac iyo Isbaaraysi ku wada fida deegaanadiina si ad u dhibaataysaan shacabkiina masaakiintaa.Waxaa dani idiin ku jirtaa in la idin maamulo si aad ugu noolaataan noloshii horoo kale.Waayo haddii ad wax maamuli kartaan maa la idin ka soo arko last 27 years oo shan madaxweyne oo idinka ahaa ay soo mareen xamar iyo nawaaxigeeda.
Ugu damabyn ogoloow in aan kuu taliyo,haddii kale inta noloshaada ka hartay ku sii baaqi noqo BOM iyo Baasuke.Who cares,adlee waaye.
Madaxweynuhu wuxuu kala dirikaro ayaa iska yar, wuxuu kala diri karaa madaxweynuhu baarlamaanka markii uu waqtigiisu dhamaado sida shaciga uuyahay ama dastuurka ku qoran, laakiin haddii uu sidaas sameeyo madaxweynuhu waa sida ay qoreen qoladan newspaperka wuxuu isaguna qeyb ka noqonayaa garabyadda is haya ee baarlamaanka hadda jira, Midakale asxaabey waxaad ogaatiin ( Hal xaaraan ah Nirig xalaal ah ma dhasho).
Kkkkkk LULA aad Ayaan u soo dhawaaynayaa in aad marba walba magac dumar soo huwato kkkkk amxaarada in aay hilib qaayriin cunaan waa wax lagu qasbay.jalbaabkii Ayaa yaabay
AAD AYAAN UGA XUMAHAY IN CAQLIGAAGU KU YIRI LULA WAA NIN HUWAN MAGAC DUMAR MALAHA ADIGA IYO KUWA KULA MIDA AYAA KU DHUUNTA MAGACYADA DUMARKA ANIGA ALLAH AYAA IGA DHIGAY DUMAR WALIBA HOOYO AH WAXAAN KA DHIIBTAA FIKRADAYDA KU AADAN WADDANKAYGA IYO MAR WALBA XAALADA UU MARAYO IYO IN AAN INDHAHA U FURO SHACABKA SOOMAALIYEED OO LAGU HAGAYO QABIILKII AAN KU QASAARNAY MA AHA NIN RAGGA IN UU KU DHUUNTO MAGACA DUMAR CEEB SABABTUNA WAA IN UUSAN WAX WANAAGSAN SOO QORAYN EE UU QURUN CAY IYO QABIIL SIDAA AYAA CABSI GALISAY BE BRAVE YOU MEN
@ Somali Mooryaan
Ha Kaa Saarto markaad magacyadda Hooyooyinka sharafta leh ee aad ku soo qoreysid meeshan. Gabadha Magaca U Daa Yaa Mooryaan Waaxid.
Ceeb uma dhimanaysid ileyn Reerkiinu Ceebta wey Ku Labistaan Sidi Uniform ki……Shit
Kkkkkk kkkkkk kkkkk kkkkkk kkkkk kkkkk kkkkk kkkkk kkkkk kkkkk kkkkkk kkkkkk
LULA…..MARNA NOO SOO FARA WAA WAAYNAAYSO MARNA SOO FARA YAR YARAAYSO.KKKKK SXB LULA UUNBAAD INOO TAHAY.CARUURTAN AAD SHEEGTAY MA SOMALILANDER AYAAD U DHASHAY ISAGA AYAAD AYAANTAN ISKU SHU SHUBANAAYSEENE.KKKKK JALBAABKII AYAA YAABAY.KKKKKK
Gabadhu si fudud bay kugu fahantay in tahay Qof dhinay oo aan Xishooneyn.
Somalilander PALTALK baanu isku naqaanay wuxu sheegan jirey Muuse dhariyo walaahi, Halkan isaaq buu ku sheegtaa.
Xitaa ma soo Qori karo wuxu isaaq ka yahay. Hadda kohor baa Pa;talk dhexdiisa lagu yiri Magaca Somalilander laguma Noqdo Isaaq walaahi saas baa lagu yiri. Car ha soo qoro wuxu ka yahay isaaq.
@ Marwo Lula
Walaal Meeshan Dad baa soo Gala Maskaxda ka jiran oo dagaaladdi somali ay waxyeelo u geysatay ama Dad muslin ah soo Dilay ha la yaabin waa dad iskuyaacsan oo damiir iyo diin midna lahayn.
Kan wata somali waa nin Daciif ah oo dumarka aan ka Xishoon. Anagaa Xaal kaa siinay walaal.
Insha Allaah saacaddaan laga bilaabo anigaa LUULA kaa difaaci doona all rogues (Mooryaan oo dhan).Xaattaa JEEGAANAT hargeeysa.Lulay ka bax adigu anigaa aqaane sida loola bacooltama Mooryaan-HUUTUUGA iyo JEEGAANTABA.Insha Allaah si caadi ah u soo rayi dhiibo.Kana soo hadal rayigaad rabtid adigoo an fadhi-ku-dirirka xadkiisa dhaafin.Lix sano baan halkaan ka cayrimayey Mooryaan-HUUTUUGA oo qaar badan baan banaanka dhigay.Waayo waxaan aqaan meelaha laga taabto HUUTUUGA.Aniga soomaali oo idil waa isugu kay mid.Waxaana jaalkay ah labo ka mida.Labadaas oo kala ah hadba kii laga gardaran yahay oo waa in aan xaqqa ugu hiiliyaa iyo kan isaguna xaqqa iyo soomaalinimad ku taagan.Labadaasu waa reer tolkay.Walaalkay Mooryaaan ah iigama duwan Mooryaan somali iyo Xaaji JEEGAAN.Luulay do not worry about the Rogues (Mooryaanta).Mooryaan maxuu kaa qaadi karaa illaa isagaa Mooryaan ahe.Mooryaan-Huutuu ka hor leexo gabdhaha soomaliyeed ha soo rayi dhiibteene.
LULA WAA HABARTI CAASHA CAWAD EE WARERSANSYD,KKKKK MAXAY TIRI HOYAN AHAY,KKKKKKKKKKK,OO TOLOW YAA KA DHALAY ANAGAA WAX ARAGNAY,KKKKKKKKK
Adi yaa ku difacaya,msr kasta dhuumashad ku soo gashaa ood waloba ragaad dhabarka ka toogataa,
Waxan ki oran lahaa adigu idbadbaadi habaryahay fulayada ahi,kkkkkkkkkkkkk
Saxid; adigu isbadbaadi atariishoy
Jawaahiri oo bari la ridayo,inkastoo kooxda jawaahiri meesha ka tuuraysaa ay haystaan codad ku filan ayaa hadana waxay ka cabsi qabaan in ay rabshado sameyaan kuwa jawaahiri taagersan,
Sidaa darteed ayaa lasoo dhoobay ciidamo tiro badan,jawaahiri waa loo yaabaa.
UURAYSAYEYE MAXAY DHALI
Jawaahiri oo isticmalaya kaadhkii ugu danbeyey ee uu isku difaaci lahaa kadib markuu soo kiciyay shacabkii muqdisho,
Kulahaa shacabkaa difaacaya golaha baarlamanka,loo jooge bari waxa dhaca.
Yac Ka leexo Gabadha somaliyeed ee sharaft leh sharafta alla ha kaa Qaadee……Qoraalka waa lagaa xidhayaa haddaad deyn weydid Gabdhaha Wale. Nin kuu Digay kuma Dilin. Anshaxa ilaali JAALLE.
@ Xaaji Saalax
Gabdhaha Somaliyeed waa ”” NO FLY ZONE”” Waa lama taabtaan,Waa Ceeb in laba nin ay gabadha magaceed soo Qoraan sabab La’aan. Gabadha Daaye Hello.
Kkkkkk X SAALAX KKKKKKK KKKKK
saladii jumcaha ayaan ka soo baxay markiiba waxaan isha ku dhiftay sidaad atariisho u gashay.Kkkkkk Kkkl kkkkk bal yaa iyada u difaayo HARBACA kkkkk kkkk war adiga uun midaada sacbaha saaro yaan lagu fara xumaaynine ayaantan dhulkiinii waxaa ka socoto fara xumaayn dad iyo duunyaba leh.. kkkkk
Sawaaxiligu waxay ku maahmaahneed “ADABU YA KABURI AJUAE NI MAITI” (Cadaabta Qabriga Maydkaa Laga Wareystaa). Iminka bulshada Soomaaliyeed ee dalkeena ku xannibani iyaga uun baa ka warrami kara duruufaha iyo xalaadaha adag ee ay ku sugan yihiin. Waxay ku wada sugan yihiin saboolnimo iyo darxumo aan la qiyaasi karin ee aan qabiil iyo beel ahaan oogu kala aaba yeelaynin – Woqooyi, Koonfur, Bari iyo Galbeed ba. Waa shacab aan lahayn baasaboodho ay kaga dhoofaan oo kaga cararaan masiibooyinka ku habsan. Waa masaakiin aan haysanin daryeelka waddamada qurbaha ka jira ee xayaatada ugu adag ku nool.
Waxaa se toodaa haysataa ooga sii daran oo uga sii xanuun kulul kuwa la hayb sheegta ee qurbaha calfaday ee dalka in uu xasilo u diiddan. Waa kuwan bogaggan cantarabaqashka, hadaaqa caruureed iyo maalaa yacniga iyo af xumada ku camiraya ee qurbihii ay calfadeen xataa ka faa’iideysan waayay. Waa duul dulli ah ee nolosha ka dhacsan. Balwadaha oogu xun ayaa u diin iyo caado ah. Waa kuwo ama reerahoodii ka saaqiday ee deeqda caydha loogu korinayo mise haddii kale aan abidkood ba dhiiqin oo waxba dhisanin. Dhashoodii ayay adduun iyo aakhiro ba seejiyeen oo iyagii baa adduun iyo aakhiro seeg ah. Masaakiinta ay la hayb sheegtaan ee dalka ku dhex silicsan na u ma oggola in uu dalkoodu u xasilo oo inta uu qarankoodu u hirgalo ay silica iyo saxariirta kaga baxaan.
Waa dul inkaar iyo habaar ba ay isugu darsameen ee aan Ilaaha uuntay xataa ka xishoonin oo kana baqin. Bal fusuqaa af iyo addin ba ka soo baxaya daya!
Libaaxa mudug says:
Taxanihii shalay baa dagaalkii na dhex yiilay ani iyo somali waxaa soo daakhilay wiilka cubayd oo fariin muquuno ah iigu xabaalay bogii shalay wuxuu ci iyo cataawo ku yiri canshuur cumar maxamuud dhiibsan oo loo geeyo canshuurtaas booliska galmudug.iyo in gaalkacyo wax laga waydiin karo mahad qoyane oo qura.
Waayahay waa marka koowaade mahadka aad sheegtay waa mid ka mida waaxyahaan ku taaganahay.iska daa iyagee waxaan tirsanayaa oo ku xisaabtamayaa warsan gali maxaa keenay mahad qoyane.ma ninbaa ealaalkiis ka faydada ma ninbaa ina adeerkiis ka fogaada? Iyaga la’aantoodana muskujire miskiina baan ku banaanaan lahaa. hadana inaad carabaabtaa mahad ruush waxay ii tahay guul iisoo hoyatay.waxaad u xustayna waa aqaanaa oo “waa maaruhuu kugu cuskaday dirirtii caar wayne”
Iljeex waan aqaanaa baad kufaantaaye goormaad nabaratay xagee nagu baratay war doqonkaan dad malaha miyaa degaan mawadaagno dameeraha yagu isma kudaan war shacabka somaliland ayaad kamitahay goormaad nabaratay majo&madax maxaa isu keenay anigu waxaan xoog kumaamula konfurta&bartamaha somaliya halkaas ayaan qoor ka ahay adiguna lahayste yaroo miskiin ah ayaad tahay war meeyey idoorkii dadkaan lahaa war ilma adeerayaaloow naga ceshada waxaan kalee kuusheegayaa ninka airportka gaalkacyo baada iiga qaada haduu awoodaas leeyahay muu dhisto maxjarkii&wadadii aan diiday inuu dhisto Waliba xaafada garsoor kuyaalay hade ogow meesha aan diiday dhismaheeda baraxley maaha bal ninka habeen qura 800 laga dilay aarsan waayey ayaa faanaya iljeex wali waxay xoog kuhaysataa beerihii&dabaqyadii aad xatooyada Xoolaha umada kudhisateen iljeex waa mida saxaraha&qaxootiga biday daarood afkeyga qoyan looma hadlo wax muuqda la imow faankii dumarka looma baahna
Walaal ma inagii baa been meesha isugu xabaalayna?
Canshuur baa loo geeyaa mooryaan si loogu naaxiyo galmudug waxaa sheegay camey !!!. Waa hallaan saabka galayn. Ima soo gaarin warkaasi.
Ha yeeshee Bataatanba Warkaasi ma beensan karo waayo handicap gaas xoolo ma waxaan kasuuroobin baa jira.
Ma yahay nin sharafi qabato ma yahay nin aay foolxumada karto mayahay nin kulaylka raganimo ay damaq iyo daano ku hayso.
Dhanka kale dulinimadaasi haday jirto looma qaadan karo cumar maxamuud oo gaabin iyo guri ba ay salka u yaala.
War sacad siciid waa geesiyaal mana aaminsani wallee iyo billee in cid alle abuurtay ay geesinomo ka badisee hadii abgaalka banaadir joogaa iyo xasan culusoow canshuur kusoo rogaan gaas handicap shaki iigama jiro inuu u dirayo oo dhiibayo. Hadaba arinta mooryaanta galmudug baa canshuur lagu naaxiyo waxaa dira gaas candho siil ima soo gaarin oo waa war igu cusub waase daba kacayaa.
Haday run noqoto ma fadhi danbaa yaala soow wixii raganimo lahoow kaca oo qoriga garabka saarta maaha.
Walaahay xitaa hadii cumar maxamuud isku jabayaan oo huf iska dhigayaan walaahay axsan in inta lagu kaco habeenoo madoow haylahda la cunsiiyo deetana wixii dhumaya iyo wixii dhimanayaba yeelkoode mar uun dhinac isaga iyo musuqmaasuqiisaba iyo heeryada sharaf xumo ee dusha uu noo saaray la isaga wareejiyaa
Uninformed and uneducated atall !
Horta arinta maxjarka
Walaal mar horaa walee iyo billee la dhamays tiray. Oo waa howl laga faraxashay. Waa dhab aan hubin u baahnayn. Dagaalkoo socda baana la dhamays tiray. Markii la dhamays tiray baa lagu gaardiyey oo cutubyo ciidanka daraawishta puntland baa gurdan iyo gaado ka ciyaar ku wareegay. Iyagoo wata gaadiidkii dagaalka oo raacraaca ah bay ku wareegeen..Hadaadan i rumaysan karina ka eeg youtubka. Waa dhab oo wallee iyo billee ah. Ilaa haatantaan aan kula hadlayo waxaa fadha maleeshio beeleed ka imaaday galbeedka iyo itopia. Too much anti hawiye rag ah baa salka la helay.taas iga qor aniga.
Hayeeshee tan jidka suuqa gaalkacyo run baad ku sheegtay oo gaas handicap waa looga adkaaday kadib markii mooryaantaad kasoo jeedo isbaaro hor dhigtay isagii.
Waxaadse ogaataa in jidku ahaa markiisii horeba meel idinku aad lahaydeen oo in la idin baado ujeedadu ahayd
Taas cidina guul uma ahayn
Hayeeshee ani libaaxa mudug ahaan waa guul mooryaameed maadaama aanan xitaa ku qancin bareejo iyo barbare dhac
Give the mooryaan to his due
Ogoow laakiin in halkaasi ay ka kacday naca aan ku laba labpodo gaas handicap iyo wuxuu wato ee ducufada ah
Malaha xadiga iyo xawaaraha raganimo ee ani iyo adi eebe galiyey baan isu dhawayn.
Ceel ninkii qoday ciida lagu rogay shuunka ku hayaay
Walaal makugu filan tahay oo ma ku deeqdaa in aad ku qanacdo maxjar baan diiday in la dhiso? Ma kugu filan tahay inaad “content” ku noqoto waxaan horjoogsaday jid 5 tilaabo ah baan banaday oo dartay loo hakiyey adoo og maalka iyo moodka iyo wali caada man powerkaad ku dhisteen oo shirkadii adeerkaa cismaan caato qandaraaska ku qaatay hadana dhul aad leedihiin laga yagleelay maantana aadan cag iyo cirib aadan soo galin karin oo salaanta lagaa tooganayo.
Dhanka kale waxaad tibaaxday inaad dad badan aad ku xasuuqday gaalkacyo. Hadaba Iyadoo xasuuqaaas dhacay kadib labadeena yaa cararay oo yaa dabada looga dhacay?
makaa adkaaday oo magaalada ma kaa cayrsaday. Maxaadse u daafacan wayday oo sidii cabdi bile cagaha wax ka dayday. Tuutsiga bay ku dhacday oo iyagoo la casuuqay bay inta hubka urursad dalkii la wareegeen. Saasoo kale stalin garaad waa la mid dagaalkii 2aad.waa lagu xasuuqay ruushka hayeeshee goobtii bay u hareen kadib markay naazigii jarmalka dabada uga dhaceen. Anna taan sameeyey waa taas.
Hadaadse ku faanayso xasuuq waxay ila tahay in lagugu qoslo inaad kasbanayso waayo cutubyo reer puntlaana baa xamar u raacay claahu yuuusuf si ay hawiye u xasuuqaan ha yeeshee haatan kuma faanayo waayo hawiye in la xasuuqo iima keenayso dan iyo daaro. Inaan liido oo sida hortiina garoonka la idiinka fara maroojiyey la i arko baan rabaa oo qura- thats all
Cubayd warsan gali kuma maqal in iidoor yeeshay.hayeeshee kasoo qaad taasi inay dhacday oo jirtay markaas soow ani kuma yeelanayo adi maadama aan waligeey kuu ahaa boqor iyo beel daaje. Oo arimahaaga wax la iga waydiin jiray.
Open ur eyes my cousin-rite there. Anaga nala dood warsan gali hanoo daba marine
Horta Canshuurta galmudug ama baada policeka galmudug ina camey ayaa sheegay mar uu galkacyo yimi YouTube kabaaro nin yahow gaas waxba ha eedayn talada in sacad loohogaansamo baruur quruntay ama reer Mahad ayey katimi waana quwada c/maxamuud qalad&jarjarka kalena kuwaasi horaa mahad qoyane uga soo adkaaday talada&baryaduna halkaas ayey katimi gaasna waa aqbalay kol hadii c/maxamuud xiniinyo laga waayey xasuuq kuma faanin laakin ninkii awood uu ku aarsado leh kama haro waxbaan cayrsaday baad tiri horta dhabarjibintii mareexaan markaad yaa daarood ahay tiri waxaan ku arsaday markaan gelinsoor mareexaan uga qaatay adiguna aad diiday inaad dhulkiisii laxoreyso abaalaawena waad tahay horta in c\_lahi muqdisho yimado nabadna caydiid weydiisto iyadaba baqdin ayaa keentay dhulkii aan degenana laygu wareejiyo hadii lahaysan karay maxaa loohaysan waayey aniguba mareexaan kiisii waan haystaaye hadaan xasuuq Dhabayaco&mid daarood kufaanayo kismaayo&koonfur ayaan kufaani lahaa